computer model number ​ကို ​ဘယ်​လို​ကြည့်​မ​လဲ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
computer model number ​ကို ​ဘယ်​လို​ကြည့်​မ​လဲ
​အ​ဟီး ​က​လေး​လေး​တွေ ​ကျ​နေ​တာ​ပဲ . ​ကိုယ့်​ကွန်​ပျူ​တာ model number ​ကို ​ကို ​မ​သိ​ဘူး​ဆို​တော့ ​တစ်​ခု​ခု ​ဖြစ်​ရင် ​ဘယ့်​နှယ့်​လုပ်​မ​တုန်း . ​ဦး​ဇင်း​ကို ​ပြော​တာ ​မ​ဟုတ်​ဘူး​နော် . ​ဟီး​ဟီး .​ဒ​ကာ​လေး​တွေ​ကို​ပြော​တာ .. Model no. ​ကို ​ကွန်​ပျူ​တာ​ရဲ့ ​ဘေး​တွေ ​အ​ပေါ်​တွေ ​နဲ့ ​အ​ထဲ​မှာ ၄-၅ ​နေ​ရာ​လောက်​ခွဲ​ပြီး​တော့ ​ထား​တတ်​ပါ​တယ် . ​မြင်​သာ​တဲ့​နေ​ရာ ​မှာ​ပဲ ​ထား​တာ​ပါ . ​အောက်​မှာ ​ပုံ​တွေ​နဲ့ ​ပြ​ထား​ပါ​တယ် ... Driver ​တွေ​ကို ​မ​သိ​ချင်​နေ .. ​ကို့​ကွန်​ပျူ​တာ model number ​ကို​တော့ ​အ​လွတ်​ကျက်​ထား​ပါ . ​ကျွန်​တော်​တို့ ​ဩ​ကာ​သ ​ကို​ရ​သ​လို​ပေါ့ . ​အ​လွတ်​ရ​အောင်​ကျက်​ထား . ​အ​ဋ​လုံ​ပ​ဋိ​လုံ​ပေါ့ . ​ဟီး​ဟီး .. ​အ​ကူ​အ​ညီ​တောင်း​တဲ့​အ​ချိန် . ​အစ်​ကို​ရာ​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး . ​ကျွန်​တော့် ​ဟို​ကောင်​ကြီး​ဗျာ . ​အဲ့​ဒါ ​ဟို​ဟာ​ဖြစ်​နေ​လို့ ​အ​ကူ​အ​ညီ​တောင်း​ရင် ​ကျွန်​တော်​လဲ ​ဟို​ဒင်း​လုပ်​တတ်​မှာ​မ​ဟုတ်​ဘူး . ​ဟီး​ဟီး
(၁) Start >> Programs >> Accessories >> System Tools >> System Information ​ကို​သွား​လိုက်​ပါ ​အဲ့​ဒီ့​အ​ထဲ​မှာ ​အ​ကုန်​ရှိ​ပါ​တယ် . ​ကိုယ့်​ကွန်​ပျူ​တာ model number၊ Driver ​အ​မျိုး​အ​စား . ​အ​ကုန်​ရှိ​တယ် .
​ဘ​လောဂ်​ကို ​ရည်​ရွယ်​ချက်​ရှိ​ရှိ ​တိုက်​ခိုက်ေ...
minn minn: ​သုံး​လို့​မ​ရ​တော့​ဘူး ​ကို​နေ​မင်း D...
HDD ​ရဲ့ bad sector ​ကို ​ဘယ်​လို Fixed ​ပြန်​လုပ်...
Bluetooth ​နဲ့ ​အင်​တာ​နက် ​ဘယ်​လို​ချိတ်​မ​လဲ .
kaspersky ​ရဲ့ version ​အ​ကုန်​လုံး​အ​တွက် ​တင်​ထာ...